Recovery fariin qoraal ah ka Broken Samsung Devices
Farriimaha qoraalka waa xog muhiim ah oo ku saabsan telefoon kasta oo iyaga laga badiyay halis khasaare halis ah in ay shaqada ama nolosha gaarka ah. Fariin qoraal ah ka fulin karaan cinwaanka muhiim ah ama faahfaahin shaqada in laga yaabo in aadan dooneynin inuu waayo. Si kastaba ha ahaatee, marar badan dhacdooyinka aan loo baahnayn waxay keeni kartaa lumista fariimaha. Mid ka mid ah kuwa ugu badan waa la jabiyay ee telefoonka. Waxaa u heer jirka ama heerka software ah, in labada kiis dhici kara inaad lumiso xog muhiim ah ama xitaa dhici karta in aad qabto in aad bedesho telefoonka haddii ay tahay unrepairable.
Halkan waxa ku jira siyaabo ugu badan ee dadku jebiyaan taleefannadooda:
1. kac tagtey ee telefoonka waa hab ugu badan telefoonada ee uu jebiyey. Iyada oo u gudanno howlaha qaar la telefoonka gacanta, waxaad u kac ku dhacay wax ama telefoonka geedo ka soo qaado gacantii waa habka caadiga ah telefoonada waa jajaban yihiin. Haddii dhaawaca ma ahan mid halis, shaqo dayactir ah waa wax fudud laakiin mararka daran, badalay telefoonka ah ikhtiyaarka kaliya.
2. Qoyaanka waa colkiin ee qalabka korontada. Phone waxaa mar kasta soo if-qoyaan inta lagu jiro maalin walba loo isticmaalo sida saliid, ama dhididka. Kac ahayn haddii qoyaan galo hardware ee telefoonka, burburi karaan qalabka muhiimka ah. Xitaa damaanad shirkadda ha ku daboolin, kuwaas oo nooca waxyeelo jireed.
3. Bricking aad telefoon u adeegsanayaan dhaqanka ka waa si kale oo aad u dhaawici kartaa telefoonka. In kastoo telefoonka waxaa lagu jir ahaan ma gaarin, laakiin ma jirto wado aad u ordi karaan telefoonka la os caadadii khaldan.
Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha laga saaray qalab Samsung jabay
Haddii ay dhacdo in aad telefoon aan si xun u jabay kaliya xog muhiim ah oo aad laga badiyay ay sabab u tahay updates ama resetting ama shil, dabadeed waxaa jira hal xal weyn in ay dib u soo ceshano xogta aad. Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) waa xalka ugu fiican ee soo kabashada xogta laga badiyay qalabka Android. Waxaad ku rakiban kartaa software this on your computer Mac ama Windows. Waxaa Launch iyo xirmaan telefoonka. Waxaa si toos ah u iskaan doonaa xogta lumay iyo muujiyo xogta recoverable. Waxaad soo kaban karto xogta sida sawiro, videos, xiriirada, fariimaha qoraalka ah, barnaamijyadooda, iwm Ha noo eegto qaababka ay:
Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u soo kabsadaan noocyo badan oo xogta laga telefoonka. Si kastaba ha ahaatee, hubi in telefoonka aan la soo dhibtay.
Interface Simple in isticmaalaa kumbiyuutar ah dhexdhexaadiye u dhaxeeya software oo aad telefoonka. Sidaa awgeed, xogta waa mid amaan ah, iyo hawlgal ah waa mid fudud.
Muuqaalka weyn waa muujinta Falanqeynta kuu ogolaanaya in aad si aad u eegto files ka hor inta aadan soo kabsado iyaga. Sidaas darteed, aad hayso fikrad dhamaystiran waxa aad soo kabsaday.
Waxaad soo celin karaa xogta lumay ay sabab u tahay sababo sida breaking shil ah, nidaamka shil, keddibna warshad iyo Laydh iftiimaya ROM.
Waxa ay taageertaa ku dhawaad ​​in ka badan 2000 qalabka android.
Sidee inuu ka soo kabsado sawiro ka Samsung Galaxy Core ama telefoonada kale Samsung in tallaabooyinka
Isticmaalka Wondershare Dr. Fone waa wax fudud oo wax ku ool ah ugu soo kabanayo macluumaadka xaalad wanaagsan. Waxaa intaa dheer, in ay interface dareen hagi doona habka tallaabo-tallaabo. All inaad samayso waa doortaan nooca xogta aad rabto in aad badbaadin, oo waa la badbaadin doonaa. Marka ay waxyeello ama xogta waxaa laga badiyay, marna ma ku rakibi xogta cusub sida ay u keeni karta in fursadaha u soo kabsaday.
Ka hor inta aan hadli kartaa waxaa jira waxyaabo yaryar oo loo baahan yahay:
1. Cable USB in ay ku xidhmaan phone in kombiyuutarka
2. Computer, Mac ama Windows
3. Wondershare Dr. Fone u Android lagu rakibay kombuyuutar
Si aad u bilaabaan oo leh, rakibi oo ay maamulaan barnaamijka on your computer, ka dibna uu furmo suuqa ugu weyn ee ku tusi doonaa sida soo socota.
Tallaabada 1. Isku aad jebiyey phone Samsung in kombiyuutarka
Connect qalab Samsung jebiyey si aad u computer dhex cable USB ah. Haddii aad hesho suuqa kala hoose, waxaad u baahan tahay in ay awood u debugging USB on qalab aad. Waxaad u soo raaci kartaa sida hoos ku qoran, ama tilmaanta ku cad suuqa kala. Labada iyaga ka mid ah waa isku mid.
1) Android 2.3 ama ka hor: Ku qor "Settings" <Riix "Codsiyada" <Riix "Development" <Hubi "debugging USB"
2) Android 3.0 in 4.1: Ku qor "Settings" <Riix "fursadaha Developer" <Hubi "USB debugging "
3) Wixii Android 4.2 ama cusub: Ku qor "Settings" <Riix "About Phone" <Tubada "Dhis tirada" dhowr jeer ilaa helo qoraal ah "in aad ka yar tahay hab sameeysa" <Back to "Settings" <Riix "Developer fursadaha "<Hubi" debugging USB "
Fiiro gaar ah: Marka aad awood debugging USB ah oo ku saabsan qalab Samsung jabay, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in barkinta xiriir. Fadlan mar kale in ay ku xirmaan ka dib markii aad u samayn. Markaas waxaa kuu tilmaami doona tallaabada xigta.
Tallaabada 2. Sawirka aad qalab Samsung jebiyey
Marka aad halkan yimaadaan, telefoonka ayaa si guul leh loo ogaado by barnaamijka. Hubi in batteriga aad telefoonka ee ka badan tahay 20%, si aad horay u habsami dhaqaajin karin. Markaas riix "Start" si ay u falanqeeyaan xogta ku saabsan qalabka Samsung jebiyey.
Falanqaynta waa si dhakhso ah oo kaliya ay kugu qaadatay dhawr ilbiriqsi. Dabadiisna, aad arki doonaa suuqa kala hoose. Screen Waxaad Samsung qalab ayaa eegi doona sida tusaale cad u furmo suuqa. Raac tilmaanta in guji "ogolow" si aad u hesho amarka iyada oo loo marayo. Markaas waxaa u timid dib si aad u computer, oo guji "Start" ee suuqa kala barnaamijka ayaa si baarista telefoonka ee xogta ku yaal.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan fariimaha qoraalka ah ka jebiyey mobile Samsung
Waxaad u baahan tahay in ay sugaan wakhti yar dheer untile scan ku dhameystiray. Markaas waxaad ku eegaan kartaa fariimaha oo dhan ka helay on your jebiyey Samsung mid mobile ka mid ah. Fariimaha waxaa lagu muujiyey midabbo kala duwan. Mid ka mid ah waa in ay farriimaha tirtiray, oo kale waxaa qoraalka jira. Waxaad u kala sooci karaa iyada oo la isticmaalayo badhanka dusheeda: bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo keliya. Markaas calaamadee kuwa aad rabto in aad ceshan iyaga eegista adigoo gujinaya "Ladnaansho".
Intaa waxaa dheer, in aad ku eegaan karo oo ka soo kabsado xiriirada, sawiro iyo videos (Falanqeynta lahayn), sida aad sameyn la fariimaha.
Talooyin in la dayactiro ah qalab Samsung jabay iskaa
- Marka hore, tip qof kasta oo raadineysa inay cusboonaysiiyaan phone waa hagaajin halis ugu adiga kuu gaar ah. Maxaa yeelay, idinku ma aqoon farsamo, waxaad la kulmi kara wax yeesho telefoonka.
- Hubi in aad la xiriirto xarunta adeegga hore in la ogaado arrinta. Xaaladdan oo kale waa in damaanad ah, waxaa haboon isku dayaya.
- Order qaybo badalka kaliya ka dib markii aad ogtahay sababta dhabta ah ee dhibaatada. Wuxuu badbaadin doonaa lacag iyo waqti.
- Hel qalabka saxda ah si ay u cusboonaysiiyaan telefoonka. Sida caadiga ah, waxaa jira qalab gaar ah loo furo iyo taabato hardware ee telefoonka casriga ah.
- Hel oo dhan software lagama maarmaanka ah si ay u maareeyaan telefoonka. Dhammaan lagtiisa, faylasha nidaamka qalliinka iyo qaar badan. Waxaa intaa dheer, muhiimsan ogaado sida loo isticmaalo si ay u cusboonaysiiyaan telefoonka.
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Message Text ka jaban Qalabka Samsung